Saafi Films - News: Ciidamo Katirsan Dowlada Soomaaliya Oo Maanta Tababar Loofuray
Ciidamo Katirsan Dowlada Soomaaliya Oo Maanta Tababar Loofuray
Ciidamaan maanta loofuray tababarkaan ayaa waxa ay gaarayaan tiradaoo ilaa 40-askari oo ah kuwo Boolis ah islamarkaana laga soo dhex xulay Saldhigyada waaweyn ee ku yaal Magaalada Muqdisho oo ay maamusho Dowlada Soomaaliya.
Waxaana goobta tababarka loogu furaayey ciidankaan xaadir ku ahaa Saaraakiil kasocotay Ciidamada Booliska Soomaaliyeed iyo waliba Saraakiil ka socotay ciidamada Booliiska AMISOM.
Waxaana halkaasi Saxaafada kula hadlay Taliyaha Dugsiga Tababarka Xarunta Generaal Kaahiye ee Magaalada Muqdisho Generaal Abuukar Axmed waxaana uu halkaasi ka sheegay in uu yahay ujeedada kulankaan sidii Ciidankaan loobari lahaa Baarista dambiyada kala duwan.
Waxaana uu Taliya kula dardaarmay Ciidamaadaan maanta tababarka loo furay inay siwanaagsan u qaataan casharadooda ku aadan dhanka tababarka isagoona ka rajeeyay markii ay soodhameestaan tababarka ay si wanaagsan ugu dhaqmidoonaan.
Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay Afhayeenka ciidamada Booliiska Soomaaliyeed C/laahi Xasan Bariise oo halkaasi ka hadlay ayaa dhankiisa dardaaran xoogan ujeediyay ciidamada Booliiska ee 40-gaaraya kuwaasi oo maanta tababarka dambi baarista loo furay.
Dhawaan ayaa waxa ay aheyd markii ay Ciidamo katirsan Booliiska Soomaaliyeed Magaalada Muqdisho looga furay tababar caynkaan oo kale ah gaar ahaan dugsiga Generaal Kaahiye iyagoona lagu barayey barista dambiyada kala duwan.
nasro on October 28 2012 ·
4,477,668 unique visits